Vaovao - tsenan'ny Motor Asynchronous hanatsarana ny fomba fijery miabo
Tsenan'ny Motor Asynchronous hanamafisana ny fomba fijery miabo
Tsenan'ny Motor tsy misy ifandraisany hampisondrotra ny fomba fijery miabo
Ny kinova farany tamin'ny fandalinana ny tsena tamin'ny taona 2020 momba ny Tsena Motor Asynchronous misy ny 103 miaraka amin'ireo takelaka, tabilao, sary ary sary izay mora azo amin'ny fampisehoana fanadihadiana lalina.
Ny Coremavirus Pandemie (COVID-19) dia nisy fiatraikany tamin'ny lafim-piainana rehetra manerantany. Izany dia nanjary fanovana maro tamin'ny toe-javatra eo amin'ny tsena. Ny tatitra dia manarona ny seho tsena miova haingana sy ny tombana ny fiatraikany voalohany sy ho avy.
Môtô tsy mitambatra, antsoina koa hoe motera fampidirana, dia motera ankehitriny mifandimby. Ny coil stator dia mampiasa induction electromagnetic mba hiteraka ankehitriny ny rotor, ary ny motera dia mamokatra tora-kazo, ka tsy mila andriamby maharitra. Ny motera tsy misy ifandraisany dia azo zaraina amin'ny tranom-borona miolakolaka sy tranom-borona miendrika rotor. Ny karazana miolakolaka dia môtô dingana telo, ary ny karazana tranom-biby dia manana motera dingana telo sy motera iray tokan-tena. Ny rotor an'ny motera fampidirana sifotra dia azo ampifandraisina amin'ny circuitry ivelany mankany amin'ny motera.
Raha ny fikarohana sy ny fikarohana dia nametraka ny fisiany manerantany ny tsena. Ny fandinihana ny fikarohana momba ny tsena amin'ny moto tsy mitambatra dia manolotra tomban'ezaka feno amin'ny tsena ary misy fironana ho avy, anton-javatra mitombo ankehitriny, hevitra mifantoka, antsipiriany ary angona momba ny tsena voamarina amin'ny indostria.
Mpilalao tsena manerantany, izay hipoitra ary handresy ny 2020 amin'ny tsenan'ny moto tsy mihira
Raha nibanjina ny taona 2020, ny tsena manerantany dia antenaina ho taona manan-danja ho an'ny tsenan'ny Motor Asynchronous amin'ny resaka fitomboana sy fidiram-bola.
Saika ny orinasa rehetra izay voatanisa na voasoratra anarana dia manavao ny fangatahany ho an'ny traikefa farany ho an'ny mpampiasa ary manangana ny toerana maharitra ho azy ireo amin'ny taona 2020. Ity tatitra ity dia nifantoka sy nifantoka tamin'ireo orinasa ireo, toy ny Bosch Rexroth, SIEMENS, TATUNG, Emerson, SHANDONG HUALI, ABB , STOEBER, GEORGII KOBOLD, SERVAX, TECO, Wolong, HITACHI, Bonda Industry, Dazhong, ANHUI WANNAN, YASKAWA, JLEM, Jiangte, JJE, SchabmÃ¼ller, AMK, HEIDENHAIN, XEMG, SPG, Ydmotor, Dongming, MOTORI BON -Beloit, ABM Greiffenberger.
Ankoatr'izay, ny fikarohana dia manome topy topy topimaso momba ny fisarahana isam-paritra voasokajy ho mitarika faritry ny taham-pisondrotana, firenena manana anjaran-tsena avo indrindra amin'ny tranga taloha sy ankehitriny. Ny sasany amin'ireo fisarahana ara-jeografika tafiditra ao amin'ny fandinihana dia i Amerika Avaratra (Voasaron'ny Toko 7 sy 14), Etazonia, Kanada, Mexico, Eoropa (Voarakotra ao amin'ny Toko 8 sy 14), Alemana, UK, France, Italia, Espana, Rosia.
Miaraka amin'ny vinavinan'ny tsena Asynchronous Motor hanitatra ny CAGR% amin'ny taona 2020 ary amin'ny XXXX noheverina ho mpahazo tombontsoa lehibe dia tsara toerana kokoa noho ZZZZ ho an'ny taona 2020.
Ny fikorianan'ny ampahan'ny orinasa vaovao dia nanjary nandondona tamin'ny taona 2020 ho an'ny tsena motor tsy mihira
Araka ny fandinihana ny tsena AMR, ny fironana vao haingana amin'ny safidin'ny mpanjifa ankafiziny toa ny karazany dia ho sarotra kokoa ny fampiharana. Ny varotra segondra tsy misy ifandraisany amin'ny motor dia hamakivaky ny marika $$ amin'ny 2020.
Tsy toy ny fizarana voasokajy mahomby eo amin'ny sehatry ny asa toy ny Type (Motor tsy misy ifandraisany telo, Motor tsy miova irery) ary avy amin'ny mpampiasa farany / fampiharana (fitaovana milina, fanodinana kely, fitaovana, paompy, milina maivana, metalyurgie, milina fitrandrahana harena ankibon'ny tany, ny hafa).
Ny kinova 2020 an'ny fandinihana ny tsena Asynchronous Motor dia nizara / nihena kokoa mba hanasongadinana ny fihodinan'ny indostria farany vao misondrotra.
Ny fitondran-tenan'ny mpanjifa sy ny fanovana tiany, Ahoana ny fomba faneken'ireo orinasa Asynchronous Motor?
Noho ny fiovan'ny safidin'ny mpanjifa miaraka amin'ny fijerena ny fandefasana ny tatitra momba ny varotra sy ny vola miditra farany, ny mpivarotra lehibe eo amin'ny tsena Global dia manandrana misarika ny sain'ny mpampiasa farany na ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny "Fanolorana sy tolotra fanampiny".
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny teknolojia farany sy ny famakafakana momba ny tinady, ny mpilalao Key dia mahazo ny fitondran-tenan'ny mpanjifa sy ny safidiny miovaova.
Averina indray, ny orinasa mpamatsy vola na goavam-be dia vonona ny hametraka renivohitra bebe kokoa hahazoana ny zava-bitan'ny mpilalao fototra eo amin'ny tsena ho an'ny rindranasa na vokatra vaovao.
Tanjona sy tanjon'ny fikarohana
Mba hanadihadiana sy handinihana ny haben'ny tsena Asynchronous Motor amin'ny faritra / firenena manan-danja, ny karazana sy ny fampiharana, ny angona taloha hatramin'ny 2014 ka hatramin'ny 2018, ary tombanana na vinavina hatramin'ny 2026.
Hahafantatra ny firafitry ny tsena motor tsy mihira amin'ny fanekena ireo zana-tsokajy maro.
Mifantoka amin'ny mpilalao tsena Asynchronous Motor lehibe, hamaritana, mamaritra ary hamakafaka ny lanja, ny fizarana tsena, ny tontolon'ny fifaninanana tsena, ny fandalinana SWOT ary ny drafitra fampandrosoana mandritra ny taona vitsivitsy.
Ny fandikana ny tsena Asynchronous Motor momba ny firoboroboan'ny fitomboana manokana, ny vinavinany ary ny fandraisany anjara amin'ny tsena manontolo.
Mizara fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ireo lafin-javatra lehibe misy fiatraikany amin'ny fitomboan'ny tsena (mety ho fitomboana, fotoana mety, mpamily, fanamby sy risika manokana ho an'ny indostria).
Mamolavola ny haben'ny tsenan'ny Motor Asynchronous, momba ny faritra, karazana ary fampiharana lehibe.
Manazava ny fivoaran'ny fifaninanana toa ny fanitarana, ny fifanarahana, ny famoahana vokatra vaovao ary ny fahazoana am-barotra ary maro hafa.
Famakafakana ny fiatraikany COVID-19 eo amin'ny tsenan'ny moto tsy mifangaro
Misaotra anao tamin'ny famakiana ity lahatsoratra ity, azonao atao ihany koa ny mahazo ny fizarana hendry na fizarana fahendrena ho an'ny fizarana toa an'i Amerika Avaratra, Eropa Andrefana / Atsinanana na Azia atsimo atsinanana.
Miaraka amin'ny angon-drakitra nomena, ny Research on Global Markets dia manolotra fanaingoana mifanaraka amin'ny filàna manokana. Manorata amin'ny AMR
Fotoana fandefasana: Nov-09-2020